वीपी प्रतिष्ठानमा लूट मच्चाउनेलाई कसले गर्ने कारवाही ? – Makalukhabar.com
वीपी प्रतिष्ठानमा लूट मच्चाउनेलाई कसले गर्ने कारवाही ?
२०७४ जेष्ठ १५ ००:०० मा प्रकाशित 30 0
साउन २८, सुनसरी । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गत वर्षको असोज २४ गते नेपाल समाचारपत्रमा एउटा बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गर्यो । Full High Definition Endoscopic camera with Integrated, Innovative Visualization Technology चाहियो । त्यसको ८ महिना पछि ०७५ जेठ २७ गतेको निर्णय अनुसार टेण्डर रद्द गरिएको अर्को सुचना आयो ।
गत वर्ष एमआरआई १.५ टेस्ला उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान नै गर्नुपर्यो । जसको अहिलेसम्म टुँगो लागेको छैन । एमआरआई खरिद प्रक्रिया रद्द भइसकेको छ ।
यी उदाहरण मात्र हुन् ।
सप्लायर्स, प्रतिष्ठानका कर्मचारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाईलाई अध्ययन गर्दा प्रतिष्ठानका दुई जिम्मेवार कर्मचारीका कारण यस्तो भएको रहेछ । प्रतिष्ठानको खरिद समितिका सदस्य सचिव रमेश पण्डित र मुल्याङकन समितिका सदस्य को जोडी अचम्मको देखियो । उनीहरु सँगै हिँड्दैनन, खाँदैनन् तर, प्रतिष्ठानले आब्हान गर्ने हरेक टेण्डर प्रक्रियामा सँगसँगै हुन्छन् । उनीहरुको एउटै बोली हुन्छ ।
दुईको मिलेमतोमा कसलाई टेण्डर दिने कसलाई नदिने निर्णय हुन्छ । कसको स्पेसिफिकेशन मिल्छ तय हुन्छ । अनी त्यहि अनुसार टेण्डर स्विकृत गर्ने नगर्ने निर्णय सम्म उनीहरुकै हातमा हुन्छ ।
आफ्नालाई हात बाहिरका लाई लात
ठेकेदार र सप्लायर्ससँग सेटिङ गरेर लाखौं कमिसन खान पल्केका यी दुईले प्रक्रिया विपरित टेन्डर स्विकृत गर्ने मात्र हैन, सप्लायर्सकै चाहनामा टेण्डर खोल्छन्, अनी उनीहरुलाई नै पार्छन् । ‘खरिदका सदस्य सचिव पण्डितले आफ्नो पायक पर्नेलाई टेण्डर पार्नुपर्यो भने एकै दिनमा मुल्यांङकन गरेर दोब्बर मुल्यमा टेण्डर स्विकृत गर्छन् । आफ्नाको टेण्डर नपर्दा महिनौ झुलाएर वार्गेनिङ गर्छन्, अनी नमिलेको खण्डमा अनेक कारण देखाएर रद्द गर्छन् ।’ प्रतिष्ठानमा वर्षौदेखि विभिन्न सामान सप्लाइ गर्दै आएका एक ठेकेदारले भने ।
रमेश पण्डित र विकास साहको मिलिभगतमा चाहेको बेला टेण्डर खोल्ने नचाहेको बेला महिनौ लगाइदिँदा टेण्डरमा भाग लिनेलाई घाटा भइरहेको छ । ती सप्लायर्सका अनुसार टेण्डर विड गर्दा लागेको पैसा, फर्म र त्यहाँ खर्चिएको पैसा त्यसै खेर जान्छ । ‘प्रक्रिया पुरा नभएर टेण्डर रद्द हुँदा दुखः लाग्दैन, तर यहाँ जानीजानी गलत नियत राखेर टेण्डर रद्द हुन्छ । यस्ता कर्मचारीलाई पनि कारवाही गर्ने प्रावधान आउन आवश्यक छ ।’ उनले भने ।
केहि समय अगाडी प्रतिष्ठानको भेन्टिलेटर विग्रिए, सामान्य मर्मत गरेर पुनः सञ्चालन गर्न सकिने भएपनि प्रतिष्ठान ब्यवस्थापनले ती भेन्टिलेटर मर्मत गर्नुको सट्टा नयाँ किन्ने काम गर्यो । अहिले पुरानालाई थन्क्याएर काठमाडौंको मेडिकल सलुसनबाट १० ओटा नयाँ भेन्टिलेटर खरिद गरिएको छ । यस्तै करिब १ करोड बराबरको माइक्रोस्कोप विग्रियो । सामान्य पावर सप्लाई विग्रिएर थन्किएको माइक्रोस्कोपलाई बनाउनुको सट्टा नयाँ किन्ने तयारी भर्इरहेकाे छ । एमआरआई १.५ टेष्ला खरिद प्रकरणमा पनि त्यहि भएको हो ।
प्रतिष्ठानको इमरजेन्सी अगाडी लाखौं मुल्यका फर्निचर कुहिएर बसेका छन्, त्यसलाई संरक्षण गर्ने योजना प्रतिष्ठानले गर्न सकेको छैन, बरु प्रतिष्ठानका पदाधिकारीका बंगलामा नयाँनयाँ फर्निचर र घरायसी सामान धमाधम भित्रदैछ ।
खरिद समितिका संयोजक पण्डित प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा. राजकुमार रौनियारका खास मान्छे हुन् । यीनले ठाडै सप्लायर्स र ठेकेदारलाई वार्गेनिङ गर्ने गरेको एक सप्लायर्सले नाम नबताउने शर्तमा भने । ‘के गर्ने काम गर्नुपर्छ, दुइ चार पैसा कमाउन खर्च नगरी काम पाइन्न, पण्डित र साहले हैरान बनाए ।’
लुगाधुने केमिकलको अभाव
पछिल्लो समय प्रतिष्ठानमा सरसफाइको सामान अभाव छ । केहि महिना अगाडी प्रतिष्ठानले लुगाधुने केमिकलको टेण्डर आब्हान गर्यो । टेण्डरमा एउटा मात्र फर्मले भाग लिएको भन्दै टेण्डर रद्द गरियो । त्यसपछि पुनः दोस्रो पटक टेण्डर आब्हान गरियो, सबै मापदण्ड पुरा गरेर सप्लायर्सले टेण्डर मा भाग लिए तर, अहिले अन्तिम अवस्थामा विना कारण टेण्डर रद्द गर्ने चलखेल भइरहेको छ ।
प्रतिष्ठानका विरामीले प्रयोग गर्ने कपडा विशेष प्रकारको केमिकल हालेर धुने गरिएपनि अहिले केमिकल अभावका कारण सामान्य सर्फ, सोडा र व्लिचिङ पाउडर प्रयोग गरेर कपडा धुने गरिएको छ । रमेश पण्डित र विकास साहको दवावमा टेण्डर रद्द गर्ने चलखेल हुन थालेपछि प्रक्रिया पुरा गरेर टेण्डरमा आएका सप्लायर्सहरु अचम्मित भएका छन् । केमिकल खरिदमा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीले सिफारिस गरेपनि पण्डित र साहका कारण रोकिएको स्रोतको दावि छ ।
केमिकल खरिदमा पण्डित र साह नजिकको सप्लायर्सले हालेको टेण्डर नपरेपछि अहिले दोस्रो पटक टेण्डर रद्द गर्ने नियत राखेका छन् ।पण्डित र साहले आफ्नो स्वार्थपुर्तिका लागि प्रतिष्ठानमा उपचाररत सयौं विरामीको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेका छन् ।
सप्लायर्सलाई दुखः दिने काइदा
खरिद तथा मुल्यांकनमा पण्डित र साहले कतिसम्म गरेका छन् भने, आफ्ना वाहेकको सप्लायर्सले मात्र टेण्डर भरे अथवा उसको मात्र मापदण्ड पुगे त्यस्तो सप्लायर्सलाई अनेक वहाना बनाएर पत्र काट्ने, मुल्याङकन समयमा नगर्ने र टेन्डर रद्द गर्ने सम्मका कूकृत्य गरेका छन् । ‘टेण्डर पर्छ भनेर नाफा कम राखेर सबै मापदण्ड पुरा गरेर टेण्डर भर्दापनि अन्तिममा अनेक वहाना बनाएर रद्द गरिदिन्छन् ।’ एक मेडिकल सप्लायर्सले भने–‘उनीहरुलाई टेण्डर रद्द गर्ने अधिकार हुँदा हामी ब्यापारीलाई पनि के कति कारणले रद्द भयो सोध्ने अधिकार हुनुपर्छ ।’ उनको तर्क छ ।
मकालु खबरले साहसँग यो विषयमा बुझ्ने कोशिष गर्दा उनले आफ्नो करियर अझै ३० वर्षको रहेकोले यस्ता कुरामा नअल्झने बताए । ‘कसले के भन्छ मलाई मतलब छैन, तपाईलाई कसले प्रभावमा पार्यो (पैसा दिएर लेख्न लगायो) र मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ ?’ उनले भने ।
प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार देखेर नै होला यसपटक सरकारले विगतको भन्दा कम बजेट दियो । ‘एउटै टेण्डर बारम्बार खोल्नु, रद्द गर्नु भनेको ठिक हैन, मापदण्ड बनाएर टेण्डर आब्हान गरेपछि ठेकेदारले त्यहि मापदण्डलाई टेकेर टेण्डर भरेको हुन्छ । यसमा मुल्यांकन समितिले मापदण्ड पुरा गरेको नगरेको, कम लागत मुल्य कसको छ आदी हेरेर टेण्डर खुलाउने हो । तर, प्रतिष्ठानमा यसरी काम भएको पाइँदैन ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले भने ।
पूर्वको रेफरल सेन्टर भनेर सरकारले समेत मनग्य बजेट दिने गरेको वीपी प्रतिष्ठानको बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको भ्रष्टाचारको विषयमा मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति सुद्धिकरण, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत दर्जनौ उजुरी परेका छन् । तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन ।